Klipspringer - Ezanyisayo - Mzantsi Afrika
I-Klipspringer [Oreotragus oreotragus]
Igama elithi Klipspringer li-Afrikansi elithi 'i-rock jumper' kwaye libhekiselele kwikhono lezilwanyana kwintsimi eneenkangala apho kubonwa khona ukuhamba ngokukhululekile, kubonakala ngathi ku-tiptoe.
Ukulinganisa 11-13 Kg kunye nokuma 500-600mm ephakamileyo kumahlombe, eli li-antelope encinci kunye ne-stocky antelope. Iimvu zincinane kuneenkunzi zeegusha. Iigusha zineempondo ezimfutshane, ezizodwa kuphela kwisiseko. I-Klipspringer ineendlebe ezincinci ezijikelezileyo ezibekwe kude kakhulu entloko, kunye neempawu ezimnyama zangaphakathi.
Ingubo eboya iboya iguquke ngombala kunye nemithunzi yegrey, eluphuzi, emdaka okanye obomvu, ngaphantsi kweempawu ezimhlophe ezimhlophe ezimhlophe. Into evelele yintsimi enkulu, emnyama ngaphambi kwe-orbital gland.
I-Leopard, Jackals, kunye ne-Spotted Hyena inkunzi kwi-Klipspringer. Amathole athathaka kuma-Eagles naseBabons. Ngenxa yokuba i-Klipspringers kufuneka ishiye i-refuges yayo ukuze iqhube, iyakulinda kakhulu kwizilwanyana kunye nezibonakaliso ze-alarm zezinye iintlobo.
Basabela ngokubalekela kwindawo ephezulu kunye okanye ngaphandle kokubiza okokuqala, ibhinqa elikhokelayo. Emva kokukhuselekile, banikezela i-alamu yomlozo kwi-duet.
Ukutya kuququzelele ukhenketho olukhethiweyo lweentyantyambo, izihluthulelo eziluhlaza kunye neziqhamo zeentlobo ezahlukeneyo zezitshalo kunye nemifuno. Akunakuze atyale ingca. Akuxhomekeke kumanzi okusela.
I-Klipspringer, Iimvana zeSingle zizalwa kakhulu ngexesha lentsasa okanye ihlobo emva kwexesha lesigxina seenyanga ezintandathu. Incinci ixoshwa kwiqela emva komnyaka owodwa, ngeliphi iqela liye lafikelela ekuvuthweni.
Incinci enye izalwe naliphi na ixesha ngunyaka emva koxinzelelo lweenyanga ezili-7.
Abaqhubi bahamba ngeengcebiso zeenqwelwana zabo, ezide zincinci, zincinci kunye neengcebiso ezicokisekileyo. Iinqonga ezijikelezileyo zilungelelanisa kwindawo ehlala kuyo.
Amashishini kunye neebhokhwe zenza izibophelelo ezihlalayo kunye nezo zesini zivikela indawo yazo. Ngakumbi, amaqela angama-8 angabonwa kunye, mhlawumbi amaqela entsapho avela kwimimandla engumakhelwane.
I-Klipspringer inokukhethwa kweendawo zokuhlala, okubhekiselele kwiindawo ezixhambileyo zeendawo ezizintaba kunye neepoppies. Oku kuvumela ukuba i-antelope eneenyawo ezinqamlekileyo zibaleke kwizilwanyana zayo.
Imephu apho bafunyenwe khona. Bayasasazwa kule mimandla elandelayo kuMzantsi Afrika, kwiZoutpansberg naseLebombo ezintabeni kunye nasezinqabeni zamanxweme, ecaleni loMlambo waseKuiseb kwiNxweme yaseNamib, kuMlambo oMzantsi we-Orange, kwaye uqhelekileyo kwimimandla yeentaba eNtshona Koloni. Engaqhelekanga kwintaba yaseDrakensberg.
Ubunzima (Owesifa): 11 - 16 kg
Ubunzima (Owesilisa): 9 - 12 kg
Ubude (abafazi): 82 cm
Ubude (abesilisa): 82 cm
Ixesha lokuGestation: Iinyanga ezili-7
I-Horn: 10 cm (irekhodi - 16 cm)